चीनको समृद्धि र विकासबाट के अनुशरण गर्ने ? - Left Review Online
बहसः समृद्धिका लागि
चीनले विकासको महत्त्वपूर्ण अवस्था पार गरेको छ । आज चीनले विश्वभर हवाई सञ्जालन निर्माण गरेको छ । देशका कुना-काप्चासम्म मजबुद यातायातका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएको छ । विश्वकै द्रुत रेल चीनमा कुदिरहेको छ । नदी र समुद्रमाथि विशाल पुलहरु निर्माण भएको छ ।
महान् नेता क. माओत्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा गरेपछि आजको समाजवादी अवस्थासम्म आइपुग्दा चीनले धेरै विकास गरेको छ र समृद्धिको चुचुरो चुमेको छ । चीनले छोटो समयमा नै जादुमय विकास गर्नुको सम्पूर्ण श्रेय त्यहाँको नेतृत्वकर्ताहरुमा रहेको इमान्दारिता, कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरुको देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबोध र जनतामा रहेको सचेतना र प्रगतिशील संस्कृति हो । चिनियाँ जनता अध्यक्ष माओ र उहाँपछिका शीर्ष नेताहरु तेङ सियाओपिङ, च्याङ चमिन, हु चिन्ताओ हुँदै हालका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको समृद्धि र विकाशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछन्‌ र आफ्ना लोकप्रिय नेताहरुलाई अत्यन्तै आदर र सम्मान गर्दछन् ।
वास्तवमा समाजवादअघिको चीन पनि आजको नेपालजस्तै अविकसित र गरिबीको अवस्था थियो । तर पछिल्लो आधा शताब्दीमा चीनले कसरी यस्तो अकल्पनीय विकास र समृद्धि हासिल गर्‍यो ? यस विषयमा हामी नेपालीहरु पनि गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ र नेपाललाई समृद्धि र विकासको मार्गमा द्रुत गतिमा अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । वास्तवमा चीन समाजवादभित्र खुला अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्दै विश्वलाई चकित पार्न सफल भएको छ ।
वर्तमानमा हाम्रो मुलुकमा पनि कम्युनिस्टहरु सरकारमा पुगेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरुको मजबुद स्थिति छ र चीनमा पनि कम्युनिस्टहरूकै सरकार भएकाले चीन र नेपाल बिच राजनीतिक एकरुपता पनि छ । चीनले नेपाललाई एक असल छिमेकी र सज्जन मित्र ठानेको छ । अनि नेपालको समृद्धि र विकासका लागि सहकर्मी र साझेदारको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ । चीनले नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । अझ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालले चिनियाँ प्राथमिकता पाएको छ । यसबाट नेपालले फाइदा लिनु पर्दछ र चीनलाई अत्यन्तै सहृदयी भावनाले हेर्नु पर्दछ । साथै उसका सकरात्मक कुराहरुको अनुशरण गर्नु पर्दछ। हामीले चीन आजको अवस्थामा ल्याइपुराउने कारणहरूको गम्भिर अध्ययन गर्नुपर्दछ र ती नीतिहरूलाई नेपालको सापेक्षतामा लागु गर्नुपर्दछ । अबको पचास बर्षभित्र आजको चीनको स्थितिमा नेपाललाई पुर्‍याउनु पर्दछ । यो समयको माग हो र नेपाली जनताको चाहना पनि हो।
चीन आर्थिक रुपमा विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न देश हुने दिशातिर अघि बढिरहेको छ । अहिले विश्वव्यापी औद्योगिक उत्पादनमा चीनको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । चीनले स्टिल, सिमेन्ट, कोइला, बिजुली, मेसिनरी, इलोक्ट्रोनिक्स, फुटवेयर, गार्भेन्ट्स, घरायसी सामग्री लगायत करिब २ सय औद्योगक वस्तु विश्वभर पठाइरहेको छ, जसले गर्दा चीनले समृद्धिको शिखर चुम्न सम्भव भएको हो । राष्ट्रपति सीले ल्याउनु भएको ‘वन रोड, वन बेल्ट’ नीतिलाई सचेत चिनियाँ जनताले आफ्नो देशको थप विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।
चीनले विकासको महत्त्वपूर्ण अवस्था पार गरेको छ । आज चीनले विश्वभर हवाई सञ्जालन निर्माण गरेको छ । देशका कुना-काप्चासम्म मजबुद यातायातका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएको छ । विश्वकै द्रुत रेल चीनमा कुदिरहेको छ । नदी र समुद्रमाथि विशाल पुलहरु निर्माण भएको छ । केही समय अघिमात्र विश्वको सबैभन्दा लामो चीनको समुन्द्री पुलको राष्ट्रपति सी चिनफिङले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो भने चीनको विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल पनि केही समयअघि मात्र सञ्चालनमा आएको छ । अन्तरिक्ष जगतमा पनि चीनले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ, जसले गर्दा अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग “नासा” पनि चीनसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक देखिएको छ । चीनले बनाउने कृतिम सूर्य र चीनको विश्वभरी वाइफाई फ्रि गर्ने कदमको चर्चा पनि पुरानो भएको छैन । हालैमात्र चीनले विश्वकै विशाल रेडियो टेलिस्कोप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चीनका जनताहरुले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवसर पाइरहेको छन् । सरकारले धेरैभन्दा धेरै जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा अनुदान समेत दिने गरको छ । १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने गरिएको छ भने स्वास्थ्यमा पनि बिमाको व्यवस्था मार्फत अनुदान दिने गरिएको छ ।
अब हामी नेपालीहरुले पनि चीनबाट शिक्षा लिनुपर्दछ । चीन सरकारसँग सम्पर्क गरेर चीनका विज्ञहरुलाई नेपालमा निम्त्याएर उनीहरुबाट चीनको समृद्धि र विकासको कारणहरुबारे जानकारी लिनु पर्दछ र संभव हुने कुराहरू नेपालमा लागु गर्नुपर्दछ । चीन लगायत विदेशीले दिएको अरबौँ डलरको सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई नेपालको समृद्धि र विकासको मार्गमा सहभागी गराउनु पर्दछ । चीनका विज्ञहरु र नेपाली जनता बिच पुलको काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ । विभिन्न राष्ट्रिय विज्ञ टोलीहरुलाई एक अर्को देशको भ्रमण गर्न गराउन विशेष गरी नेपाल सरकार चनाखो हुनु पर्दछ । हामी नेपाली कम्युनिस्ट नेता-कार्यकर्ताहरु चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता-कार्यकर्तासँग हातेमालो गर्न तयार छौँ जसको यथोचित बोध चिनियाँ पक्षलाई गराउन हामी सफल हुनु पर्दछ ।
हामी नेपालीले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ । नेपाली मिलेर विश्वमा उत्कृष्ट संविधान लेख्यौँ । जनताका मित्र कम्युनिस्ट शक्तिलाई सरकारमा विराजमान गराउन सफल भयौँ । अब हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हाम्रो मुलुकलाई समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढाउनु हो । चीनको विकास र समृद्धिको विषयमा सरकारले सक्षम युवाहरु पहिचान गरी त्यस विषयमा अध्ययन गराउने र सम्बन्धित योजनाहरुमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न सक्यो भने नेपालको समृद्धि र विकास सम्भव छ । नेकपाको ‘एक केन्द्रीय सदस्य, एक समाजवादी गाउँको प्रमुख’ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उचित छ ।
अन्तमा, अब हामीले आफ्नो देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुदैन, जसका लागि हामी नेपालीले चीनको समृद्धि र विकासको मार्गमा संभव कुराहरू अनुशरण गर्नु पर्छ । हामी मुलुकलाई समृद्धि र विकास गर्दै समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । यसबाट नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली‘को सपना साकार हुन सक्छ ।
पछिल्लाे - नेपालको अर्थराजनीतिः मार्क्सवादी अर्थशास्त्रमा नयाँ योगदान
अघिल्लाे - कोरोना भाइरसविरुद्ध चिनियाँ कदमहरूप्रति नेपाल-चीन प्रतिष्ठानको ऐक्यबद्धता